विचार – Rastriya Yuvajagaran
परिस्थिति बिग्रियोस, मनस्थिति सप्रियोस
बाबुः हेर न छोरी खातापिता एउटा शाखा अधिकृतको कुरा आको थियो । छोरीः (फन्किदै) के म यो घरका लागि धेर भाकी हुँ । मलाई गर्नु छैन विहे सिहे । (दुई महिनापछि ) बाबुः छोरी, हेर त सरकारी अस्पतालको डाक्टर रे । एमडी गर्दै गरेको, हेर्दै लायक केटा रहेछन् । के …
कला/साहित्य, विचार, समाज 0
मृत्युपछिको सामाजिक संस्कार (किरिया) बार्ने सम्बन्धमा समयको चक्रसँगै धेरै सरलीकरण हुँदै आएको छ । हाम्रो सामाजिक दिनचर्या जति व्यस्तता हुँदैछ, जति हामी आधुनिक बन्दैछौं त्यति नै किरियाको संस्कार परिमार्जन हुँदै आएको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने १६ हिन्दु संस्कारमध्ये अन्त्येष्टिलाई विशेष मानिएको छ । मृत्युपछि परलोकको सुख र कल्याणका लागि …
सङ्घीयता अभ्यास : स्रोत र अधिकारमा सन्तुलन मिलाउँदै सरकार
अर्थ, विचार, समाज 0
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ आरम्भसँगै सरकार सङ्घीयता अभ्यासको क्रम आरम्भ भएको भन्दै वित्तीय स्रोत र विभिन्न तहका लागि निर्देशित अधिकार हस्तान्तरणमा सन्तुलन मिलाउन जुटेको छ । सङ्घीय व्यवस्थाअनुसारको बजेट सार्वजनिक भएपछि संविधान संस्थागत गर्न अधिकार र स्रोत हस्तान्तरणमा सन्तुलन आवश्यक पर्ने भएपछि सरकारी अधिकारीहरू त्यसका लागि जुटेका हुन् । अभियानको …
बाबुको विरासत थाम्नकै लागि कलिलै उमेरदेखि प्रचण्डका सारथी बनेका प्रकाश
अत्यन्तै जर्जर र पिडादायी उनको बाल्यकाल जिवनका ताजा स्मरणबाट अतितलाई बिर्सेर उनी ५२ सालदेखि भुमिगत रहेका बाबुको पथमा २०५४ साल अर्थात १४ वर्षको कलिलो उमेरमै स्कुले जिवन त्यागेर जंगलभित्रबाट बन्दुक, गोला र बारुदसँग खेल्न थाले । उनको त्यो कलिलो मानसपटलमा विद्या आर्जन गर्ने भन्दा पनि बाबुको सपना साकार कसरी बनाउने …
घर चर्किनुको मुख्य कारण के हो ? कसरी यसको रोकथाम गर्ने ?
विपिन गैरे इन्जिनियरिङको भाषामा घर चर्काइको स्वरुपलाई दुई प्रकारमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छः संरचनात्मक र गैरसंरचनात्मक। संरचनात्मक चर्काइ गलत डिजाइन, खराब निमार्ण वा अधिक भारको कारण हुन्छ। यसले भवन र आफ्नो नजिकको भागहरुको सुरक्षामा खतरा पार्ने गर्छ। गैरसंरचनात्मक चर्काइ भवन निर्माण सामाग्रीहरुमा उत्पन्न हुने आन्तरिक तनावको कारण आउँछ। यी चर्काइहरु सामान्यतया सुरक्षाको …
जनताको मूल्य तोक सरकार ?
पञ्चायत व्यवस्था भन्दा पनि घृणित, नालायिकपनको खेल खेलिँदैछ जनतासँग । पाँचजना नेता र तिनका कार्यकर्ताको पहुँचबाट देश बन्धक बनेको छ । ‘काले काले मिली खाउँ भाले’ झै पालैपालो सत्ताको स्वादले मैमत्ता हुने मात्र यो देशमा नेता भए । जो सत्तामा जान्छ त्यसले जहाँ जे गरे पनि हुन्छ ? जनता सदैव …
नेपालीको अमेरिकी मोह र नेपालीमा बस्दै गएको संस्कारका विषयमा अग्रज पत्रकार किशोर नेपालको लेख : भात अमेरिकामा खान्छन्,काम स्टोरमा गर्छन् र लेख नेपालमा लेख्छन्
-किशोर नेपाल नेपालको रमणीय धर्तीमा बसेर अमेरिकाको कल्पना गर्नेहरू धेरै छन् । अमेरिकी सरकारले खोलेको डिभी चिठ्ठामा भाग लिने नेपालीको ताँती देखेर कसको मन उल्लासमय नहोला ? नेपालमा अमेरिकाको जबर्जस्त क्रेज छ । धेरै नेपालीलाई अमेरिका अहिलेसम्मको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हो भन्ने थाहा छैन, तैपनि क्रेज अमेरिकाकै छ । बेलायत …
बामपन्थी अधिनायकबादको हल्ला निराधार
राजनीति, विचार, समाज 0
काठमाडौं, कात्तिक ०१ गते । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बामपन्थी अधिनायकबादको हल्ला निराधार रहेकोले कांग्रेसले टाउको दुखाईरहन नपर्ने बताए । उनले सञ्चारमाध्यमप्रति आक्रोशित हुँदै भने–केही सञ्चारमाध्यमहरुले एनआरएनएको चुनावका वेला १२ करोडको हल्ला चलाएर एमालेलाई बद्नाम गराउन खोजेको पनि बताए । एनआरएनएका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई बुधबार काठमाडौमा …
मानव सभ्यता र विकासको चुरो शिक्षा हो । शिक्षा नै सम्पूर्ण सिर्जना र सम्भावनाको शिर हो । शिक्षाको कुनै भौगोलिक सीमा छैन । शिक्षण सिकाइको कुनै परिलक्षित सीमा छैन । गुणस्तरको कुनै यकिन मापदण्ड छैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको खोजीमा नयाँ पुस्ता देश विदेश भौतारिँदै छ । शिक्षा आदनप्रदान घर, …
राजनीतिक घटनाप्रति गौतम र ढुंगानाले गरेका राजनीतिक टिप्पणी
माेफसल, राजनीति, विचार, समाज 0
नियमित आकस्मिकतामा यो साल, ठुलै उथलपुथल हुने – बौद्धिक व्यक्तित्व तथा राजनीतिक विश्लेषक शिव गौतम बिक्रम सम्बत १९९७ को शहिद काण्ड पछि हरेक दश वर्षको सेरो फेरोमा २००७ सालको क्रान्ति, १७ सालको सत्ता अपहरण , २८ सालको झापा बिद्रोह, ३६ सालको जनमत संग्रह, ४६ सालको क्रान्ति, ५८ सालको दरबार हत्याकाण्ड, …